17/02/2008: Submitted for publication via web
Qaybtii Koowaad 20-Febaury 1982. Lix iyo Labaatan guuradii Dhagax Tuur
by By Alpha
DIRIRTAAN GINGIMAY MAALINTUU, DHAGAXU GUUXAAYEY,
JUUN IYO MAALINTII GACANLIBAAX, GAADHKA LAGU MEERSHAY,
OOMAAR DHARAARTUU GURMADAY, GUMUCA JIIDHAAYEY,
MAXAMUUD DHARAARTUU GANBIYEY WEERAR IYO GAADMO,
GAYSTAYEY, GUBATAY WAANWAANI.
Abdirisak Alpho 1982.
Bal intaanan u galin dhagaxtuurkii Hargaysa ka dhacay labaatankii febuary kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sideetankii, aan waxoogaa dib ugu yaro noqdo xaaladdii dugsiyada iyo isbadalladii ku dhacay waxbarashada sanadihii todobaatameeyadii. Ololihii afka soomaaliga ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo todobaatankii ilaa shan iyo todobaatankii wuxuu meesha ka saaray laba sanadood oo wax barasho ahaa oo ka lumay ardaydii sanad dugsiyeedkii todobaatan iyo labadii-todobaatan iyo sadexdii bilaabay fasalka koowaad ee dugsiyada hoose. Kuwaasi oo sanadna uu kaga lumay ololahaa, sanadka kalena kaga lumay ardaydii sanad dugsiyeedkii todobaatan iyo sadex todobaatan iyo afartii oo la soo gaadhsiiyey layskuna daray iyadoo layskaga dhigay lod kali ah, sababtaasi waxay noqotay sababta keentay in dugsiyada dhaxe wakhtigaa ardaydaasi kaga baxaan fasalka lixaad halka lagaga bixi jiray dugsiga dhexe fasalka sideedaad.
Isku darka labadaasi fasal wuxuu dhaliyey buux dhaaf uu fasalkii sodonka arday dhigan jireen ugu badnaan, ay dhigtaan lixdameeyo arday taasi oo keentay cidhiidhi iyo waxbarasho xumo ka dhalatay macalinkii oo awoodi kari waayey inuu lixdan arday casharka wada gaadhsiiyo. Hadaba ardaydaasi waxay dugsiga dhaxe ka baxeen sanadkii kow iyo sideetankii kuwaasi oo ahaa ardaydii ugu badnayd inta la garanaayo taariikhda ee ka soo baxda dugsiyada dhaxe ee dalkii laysku odhan jiray Soomaaliya, sababtaasi aawadeedna waxaa magaalda Hargaysa laga furay wakhtigaa xafiiska imtixaanada, kaasi oo loogu talo galay in lagu saxo imtixaankii ardaydii gobolada waqooyi, iyadoo markii hore lagu soo saxi jiray imtixaanaadka lagaga baxayo dugsiga dhexe iyo ka sare magaalada Xamar. Sixiddii imtixaanaadkaasi waxay dib uga dhacday wakhtigii loogu talo galay, waxaanay ardaydaasi ku dhacday mudo lix bilood ah bilaa iskuul taasi oo keentay in ardaydu maalin walba ay isugu timaado wasaaradda waxbarshada amm xafiiskaa imtixaanaadka hortiisa iyagoo aad u gadoodsan, maalmaha qaarna waxay ardaydu sameeyeen rabshado iyo buuq dhan ka ah wasaaradda waxbarashada. Bilawgii sanaddugsiyeedkaasi oo ardaydaasi dugsiyada sare soo galeen bishii April ee sanadkii kow iyo sideetankii halkii ay ka gali lahaayeen bishii November ee sideetankii ayaa waxay ardaydu la kulmiieen iskuulo la'aan iyadoo ay kala bateen ardaydii iyo tiradii dugsiyada sare oo aad u yaraa. Waxaa iyana wakhtigaa bilaabmay macalimiintii tayada lahaa oo shaqada iskaga tagay sabato dhaqaale iyo maamul xumo awgeed, waxaa kale oo wakhtigaa sideetamaadkii soo shaac baxay cadaadiskii lagu hayay Guud ahaanba goboladii waqooyi ee dalkii laysku odhan jiray Soomaaliya.
AASAASKII URURKII AQOONYAHANKA EE UFFO.
Waxaa marba marka ka danbeeya soo shaacbaxayay dhibta iyo cadaadiska Dawladdii Siyaad Barre ay ku haysay Gobolada waqooyi ee Soomaaliyadii hore. Waxaad arkaysay dibudhaca magaalooyinka ee dhinacyada waxbarshada, caafimaadka, wax soo saarka , dhaqaalaha iyo waliba cadaadiska lagu hayo saraakiishii ciidamada, madaxdii hayadaha dawladda iyo aqoonyahankii u dhashay goboladii waqooyi galbeed. Uffo wuxuu ahaa urur ay ku bahoobeen aqoonyahan ka soo jeeda gobolladii la odhan jiray waqooyi galbeed kuwaasi oo u xusul duubtay sidii ay dadkooda iyo magaalooyinkoodaba wax ugu qaban lahaayeen. Uffo waa dabaysha roobka ka soo horraysa waxaana la aasaasay dabayaaqadii sanadkii sideetankii, inkasta oo taabo galkiisa iyo hana qaadkiisu uu ahaa sanadkii kow iyo sideetankii. Mudo yar oo uu ururkaasi jiray wuxuu wax ka qabtay baahida xagga caafimaadha ee Magaalada Hargaysa, kuwaasi oo dayac tir iyo qalabayn ku sameeyey dhamaan agabta cisbitaalka iyo iyagoo waliba keenay dawooyin wax loogu qabto bukaan jiifka cusbitaalka oo wakhtigaa ahaa meel isaga laftiisu u baahan wax daweeya. Isbadalka uu ururkaa Uffo ku sameeyey Cisbitaalka Hargaysa yaa wuxuu ku soo jeediyey indhihii alla uma naxariistankii naxariista darnaa ee Max'd Siyaad Barre, waxaanu mudo yar ka dib bilaabay inuu xadhig iyo xabsi ugu abaal gudo xubnihii urukaa uffo. Xadhigii ugu horeeyey wuxuu ku dhacay Axmed jabane labadii November halka ugu danbayntiina laga qabtay Max'd Macalin Cismaan iyo Maxamuud Cabdi Jiciir oo la qabtay kow iyo sodonkii bishii December ee sanadkii kow iyo sideetankii . Waxaa magaalaga Hargaysa wakhtiyadaa ka bilaabmay gurxan iyo xam-xam faro badan iyagoo ardaydu aad uga dhiidhiyey xadhigaa lagula kacay qaar ka mid ah macalimiintoodii iyo aqoonyahankii u guntaday sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahida dadkooda, waxaanay arintaasi ardayda ugu darsantay waxbarasho xumadii, Jaamacad la'aantii iyo maqnaanshaha adeeggii waxbarasho ee dugsiyada sare. Ku dhawaaqii ururkii S.N.M ayaa waxaad arkaysay ardayda oo habeenkii kaga sheekaysanaaya meelaha ay iskugu yimaadaan iyo waliba la socodka ay la socdaan xaaladda uu maraayo guud ahaanba dalkii Soomaaliya gaar ahaanna xaaladda cadaadiska ba'an ah ee uu taliskii Siyaad Barre kula kacay goboladii waqooyi galbeed.
AASAASKII URURKII DHAQ-DHAQAAQA ARDAYDA SOOMAALIYEED ( S.S.M )
Cabdirisaq sheekh Ibrahim Koshin ( alpho ).
The views published here are solely those of its authors (By Alpha) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.